I-crayfish eyanda kakhulu ephunyukile ithatha amathuna | Scrolla Izindaba
I-crayfish eyanda kakhulu ephunyukile ithatha amathuna
Amakhulu ama-crayfish ahlasele amathuna edolobheni lase-Belgium.
Izimbaza azivamisile ukuhlala emvelweni.
Zenziwe ngabadayisi bezilwane baseJalimane.
I-crayfish yeqe kubadayisi bezilwane, futhi yathatha indawo yamathuna anomlando e-Antwerp, e-Belgium.
Bambe imitha phansi emhlabathini.
Ama-crayfish yisifazane wonke futhi akhuliswe ngokuzala njalo – ngaphandle kwawesilisa.
Ngakho-ke, ziyaqhubeka ukukhula futhi zigcwale yonke indawo.
“Akulula ukuwahlanganisa wonke.
Kufana nokuzama ukukhipha amanzi olwandle ngesisefo,” kusho uKevin Scheers, isazi sezemvelo.
I-crayfish ingahamba ezweni nasemanzini futhi idle konke.